ỊHAZI ONYE NA-ARỤ ỌRỤ TP-LINK (300M WIRELESS N ROUTER TL-WR841N / TL-WR841ND) - NETWORK NA INTANETI - 2019
N'akụkọ nke oge a banyere ịmepụta onye ntanetị Wi-Fi, ana m achọ ịnọ na TP-Link (300M Wireless N Router TL-WR841N / TL-WR841ND).
Ajuju otutu ajuajiri n'ahu ndi TP-Link, obu ezie n'ozuzu, nhazi a di iche na otutu ndi ozo di iche iche. Ya mere, ka anyị leba anya na nzọụkwụ ndị dị mkpa ka a mee iji nye ma Intanet na Wi-Fi mpaghara dịka ọrụ.
1. Ijikọta onye rawụta: atụmatụ
2. Ịtọlite ​​rawụta
2.1. Dezie Ịntanetị (ụdị PPPoE)
2.2. Anyị na-edozi netwọk Wi-Fi wireless
2.3. Kwado paswọọdụ maka netwọk Wi-Fi
Enwere ọtụtụ ihe dị na azụ nke router, anyị nwere mmasị na LAN1-LAN4 (ha bụ odo na foto dị n'okpuru) na INTRNET / WAN (acha anụnụ anụnụ).
Ya mere, iji eriri (lee foto dị n'okpuru ebe a, na-acha ọcha), anyị jikọtara otu n'ime ngwa LAN nke onye ntanetị na kaadị netwọk nke kọmputa ahụ. Jikọọ USB nke onye na-ahụ maka Ịntanetị nke si n'ọnụ ụzọ ụlọ gị, jikọọ ya na WAN.
N'ezie ihe niile. Ee, site n'ụzọ, mgbe ị gbanyechara ngwaọrụ ahụ, ị ​​ga-achọpụta na ikuku nke LED + netwọk mpaghara ga-apụta na kọmputa ahụ, ruo mgbe ị na-enweghị ike ịnweta Ịntanetị (anyị esitebeghị ya).
Ugbu a mkpa tinye ntọala router. Iji mee nke a, na ihe nchọgharị ọ bụla, pịnye na ebe nkwụsị: 192.168.1.1.
Mgbe ahụ tinye paswọọdụ na nbanye: admin. N'ozuzu, ka ị ghara ikwughachi, ebe a bụ nkọwa zuru ezu banyere ụzọ esi abanye na ntọala nke onye na-ahụ maka redire, n'ụzọ, a na-agbagha ajụjụ niile a na-ahụkarị n'ebe ahụ.
N'ihe atụ anyị, anyị na-eji ụdị njikọ PPPoE. Ụdị ụdị ị na-ahọrọ, dabere na onye na-enye gị, ihe niile gbasara logins na okwuntughe, ụdị njikọ, IP, DNS, wdg kwesịrị ịdị na nkwekọrịta ahụ. Ozi a anyị ugbu a ma na-ebu na ntọala.
Na kọlụm ekpe, họrọ mpaghara Network, WAN tab. Lee isi ihe atọ dị mkpa:
1) Ụdị njikọ WAN - kọwaa ụdị njikọ. Site na ya ga-adabere n'ihe data ị chọrọ ịbanye iji jikọọ na netwọk ahụ. N'ọnọdụ anyị, PPPoE / Russia PPPoE.
2) Aha njirimara, Paswọdu - tinye nbanye na paswọọdụ iji nweta Ịntanetị site na PPPoE.
3) Mee ka Jikọọ ọnọdụ akpaghị aka - nke a ga-ekwe ka onye rawụta gị jikọọ na Ịntanetị. Enwere ụzọ na njikọ ntuziaka (anaghị adị mfe).
N'ezie, ihe niile, e debere Ịntanetị, pịa bọtịnụ Save.
Iji melite netwọk Wi-Fi wireless, gaa na ngalaba ntọala Ikuku, wee mepee Nchekwa Ntọala taabụ.
N'ebe a, ọ dịkwa mkpa ịbịaru ntinye isi atọ:
1) SSID bụ aha nke netwọk ikuku gị. Ị nwere ike ịbanye aha ọ bụla, nke ị ga-achọ ugbu a. Site na ndabara, "tp-link", ị nwere ike ịhapụ ya.
2) Mpaghara - họrọ Russia (nke ọma, ma ọ bụ nke aka gị, ọ bụrụ na mmadụ gụọ blog ọ bụghị site na Russia). Agaghị achọpụta ọnọdụ a na ntanetị niile, site n'ụzọ.
3) Lelee igbe dị na ala nke windo ahụ, na-akwado Enable Wireless Router Radio, Kwado SSID Broadcast (si otú a mee ka ọrụ Wi-Fi rụọ ọrụ).
Ị na-echekwa ntọala, netwọk Wi-Fi kwesịrị ịmalite ịrụ ọrụ. Site n'ụzọ, ana m akwado ya iji chebe ya na paswọọdụ. Banyere nke a n'okpuru.
Iji chebe netwọk Wi-Fi na paswọọdụ, gaa na ngalaba Ikuku nke Nchebe Ikuku Nche.
N'ebe dị elu nke ibe a nwere ike ịhọrọ ọnọdụ WPA-PSK / WPA2-PSK - họrọ ya. Wee tinye paswọọdụ (PSK Password) nke a ga-eji oge ọbụla ị jikọọ na netwọk ikuku gị.
Mgbe ahụ chekwaa ntọala ma malitegharịa redio (ị nwere ike ịkwụsị ike maka 10-20 sekọnd.).
Ọ dị mkpa! Ụfọdụ ISPs debanyere aha MAC nke kaadị netwọk gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbanwee adreesị MAC - Intanet nwere ike ọ gaghị adị gị n'aka. Mgbe ị gbanwere kaadi netwọk ma ọ bụ mgbe ị wụnye router - ị gbanwere adreesị a. E nwere ụzọ abụọ:
nke mbụ - ị na-ekpuchi adreesị MAC (Agaghị m ekwugharị ebe a, a kọwara ihe niile n'ụzọ zuru ezu na isiokwu ahụ; TP-Link nwere ngalaba pụrụ iche maka nkedo: Network-> Mac Clone);
nke abụọ - debanye aha adreesị MC ọhụrụ gị na onye na-enye gị (o yikarịrị ka oku ga-ezuru gị maka enyemaka maka teknụzụ).
Nke ahụ niile. Ezigbo ihu!